Dibadbaxayaal is hortaag ku sameeyey dhalinyarro Afgaanistaan lugu celinayey | Somaliska
Dibadbaxayaal is hortaag ku sameeyey dhalinyarro Afgaanistaan lugu celinayey
Habeenimadii xalay aheyd ayaa waxaa xarrunta tarxiilka ee ku taala duleedka magaaladda Göteborg ka dhacay fal dhaliyey jaha wareer, ka dib markii ay xarrunta soo dhoobteen dibadbaxayaal doonayey ineey is hor istaag ku sameeyaan dhalinyarro reer Afgaanistaan ah oo qasab dalkoodi dib loogu celinayey.
Stefan Gustafsson oo ka tirsan booliska ayaa sheegay in dibadbaxayaasha halkaasi ka dhigeen carqalado ay keentay in labbo askari ku dhaawacmo. Maalmihii ugu dambeeyey ayaa waxaa xarrunta tarxiilka Kållered ee laanta socdaalka leedahay la iskugu keenay dhalinyarro tiradoodu gareeysay 15, kuwaas oo dalkoodi la doonayey in lugu celiyo. Kooxdan dib loo celinayo ayaa koox la sheegay in da’doodu ka weyn tahay 18 jir, ka dib markii waaxda daawynta sharciga qiimeyn ay ku sameeysay ku sheegtay sidaas.
David Norén, waa baadari ka tirsan kaniisada la yiraahdo Equmeniakyrkan ee degmadda i Floda kana mid ah shaqsiyaadkii halkaasi banaanbaxa u tagay ayaa isagoo la hadlaya saxaafadda waxaa uu sheegay ay sida loola dhaqmayo dhalinyaradaasi aannu aheyd mid bani’aadnimada waafaqsan.
“Ka baadari ahaan anigoo leh dareen bani’aadnimo weey i dhibeeysa inaan iska fadhiyo iyadoo dhalinyarro siddii alaab la rarayo gaari lugu guray oo loo musaafurinayo dal uu ammaankiisa sugneyn” ayuu yiri David Norén.
Laanta socdaalka ayaa go’aan ku gaartay in dalkoodii dib loogu celiyo dhalaanka keli socdka ah ee reer Afgaanistaan kuwaas oo qaarkood waaxda daaweynta sharciga baaritaano ay ku sameeysay ku sheegtay in aaneey jirin da’da ay sheegteen kolkii ay dalkaan magangalyo weeydiisteen.
Sanadka cusub iyo saadaasha Somaliska
Nin toorey isku galiyay xarunta Laanta Socdaalka
Magangalyo doon isku dayay in uu dab qabadsiiyo kaamka magangalyo doonka